Soo saaraha Qalabka Ilkaha, Qalabka ilkaha | YAYIDA
YAYIDA Shirkadda Ilkaha ee Caafimaadka waxay ku takhasustay xawaaraha sare iyo gacan-yaraha ilkaha ee xawaaraha hooseeya iyo soosaarka qaybaha.
Ilkaha sareeya xawaare sare
Ilkaha xawaaraha hoostiisa hoose
Qalabka gacanta ee ilkaha
Ilkaha ayaa nalka iftiinka ah
Qaybta raajada ilkaha
Cabbirrada ilkaha ultrasonic
Soo saaraha Qalabka Ilkaha
'$ $> YAYIDA - Soo saaraha qalabka ilkaha ee takhasuska u leh gacan qabashada ilkaha, kursiga ilkaha iyo iftiinka nalka ilkaha tan iyo 2006
Takhasus ku leh xawaaraha sare ee ilkaha iyo gacan-yaraha xawaaraha hooseeya.
Yaarida Ilkaha Dufanka Wareegga Sare ee Shop Tratridge oo la jaan qaada TI-Max / M500l Protor Prolor Aniser
1. Nooca xiran-kaydadka, tayo sare leh oo waarta2. Gasho u adkaysta iyo waarta, xawaare deggan3. socon la Ti-Max M500 / M500L4. loosoo kaydadka button5. Imtixaanka by dheelitirka firfircoon6. dhalista Ceramic7. awood High la size madaxa fiican in ratio waxqabadka.
YAYIDA ilkaha hooseeyo handpiece kaydadka qaylada socon W H Alegra TE-95 handpiece qeybiyaha rotor
1. Nooca Open-kaydadka, tayo sare leh oo waarta2. Gasho u adkaysta iyo waarta, xawaare deggan3. socon la W H Alegra TE-954. loosoo kaydadka button5. Imtixaanka by dheelitirka firfircoon6. dhalista Ceramic7. Dusha, oo waxaa lagu daaweeyaa daahan tayo sare leh, ay hubisaa in iska caabin ah oo sare oo la xoqo, gacanta wanaagsan iyo ka hortagga ah daxalka.
YAYIDA riix handpiece ilkaha kaydadka button la jaan Sinora T3 qeybiyaha rotor handpiece
1. Nooca Open-kaydadka, tayo sare leh oo waarta2. Gasho u adkaysta iyo waarta, xawaare deggan3. socon la Sinora T34. loosoo kaydadka button5. Imtixaanka by dheelitirka firfircoon6. dhalista Ceramic7. Head thread cap iman caabiga heerkulka sare o-giraanta, waxa ee u wanaagsan fogow wasakh ah, si fiican u kordhiyo nolosha adeeg.
Yaarida Clament Carshiga gacanta gacanta lagu yaqaan 'Ettridge' oo la jaan qaada TI-max
1. Nooca Open-kaydadka, tayo sare leh oo waarta2. Gasho u adkaysta iyo waarta, xawaare deggan3. socon la Ti-Max X600 / X600L4. loosoo kaydadka button5. Imtixaanka by dheelitirka firfircoon6. dhalista Ceramicdusha 7.The, taas waxaa lagu daaweeyaa daahan tayo sare leh, ay hubisaa in iska caabin ah oo sare oo la xoqo, gacanta wanaagsan iyo ka hortagga ah daxalka.
Shirkadda 'YAYIDA' waxay leedahay hal koox oo xamaasad leh oo iibka iyo adeegga iibka kadib ah. Isla mar ahaantaana, keen hal joogsi adeegasho.
Shirkadda ayaa ku adkaysatay
"Tayada marka hore, Adeeggu marka hore". Ku adkeyso alaabada ceyriinka ah ee la soo dhoofiyo, aaladaha, jaangooyooyinka iyo cabirka, si aan isugu dayno sida ugu fiican ee aan uga dhigeyno alaabtayada inay soo dhowaadaan wax soo saarka ugu tayada fiican adduunka.
Shirkadda fuliso wax soo saarka ee ISO13485, ku adkeyso in ay soo saaraan wax soo saarka badan oo caalami ah Oo waxaan bixinnaa adeegga OEM / ODM.
Marka laga reebo heerkeena sare ee ganacsiga ODM.
Waxaan horeyba ugu rarnaa boqolaal alaabadayada ah.
Nidaamka xakamaynta tayada wax soo saarka si adag.
Mashruuc kasta oo aan ka shaqeyno waxaa loo hubiyaa hubinta tayada.
Ku saabsan YAYIDA
YAYIDA shirkadda ilkaha ku takhasusay xawaare sare iyo gacan dhaqse yar ilkaha, cilmi baarista iyo horumarinta qaybaha ilkaha qaraabo cusub iyo waxyaabaha.
Shirkadda 'YAYIDA waxay leedahay moodooyin kala duwan NomuRADS mashiin ka yimid Japan, waxay la kulmi kartaa macaamiisha adeegyadeeda saxda ah ee mashiinnada. Alaabada khaaska ah ee macaamiisha, waxaan ku adkeysaneynaa inaysan jirin wax shacab ah oo aan ka iibinayn macaamiisha kale, si ay u noqdaan ganacsi lagu kalsoonaan karo.
Waxaan jecel nahay nolosha, oo waxaan jecel nahay warshadaha ilkaha. Waxaan rajeyneynaa in waxyaabahayaga ilkaha ay ka dhigi karaan dhakhaatiirta iyo rajada bukaanku inay si sahal ah u rumowdo - Ilkaha caafimaad ka dhig.
Shirkaddu waxay hirgelisaa soosaarka ISO13485, ku adkeyso soo saar badeecooyin badan oo caalami ah.
Ilkaha LED-ka xawaaraha sare ee qalabka gacanta AYD-SLCM4
Saaxiibbadeen waxay u yimaadaan booqashada warshadeena, waxayna rabaan inay sameeyaan amarka gacan-qabashada xawaaraha sare leh iyo amarka gacan-qabashada xawaaraha hooseeya. Waxay ku faraxsan yihiin shay gacmeedkeena ilkaha iyo adeegeena. Waxaan hubnaa inay noqon doonto waqti dheer wada shaqeyn. Ku qanacsanaanta macaamilku waxay noqon doontaa dhiirrigelinteenna, waxaan sii wadi doonnaa hagaajinta tayada iyo adeegga.